LINE IKHADI - Ningbo Zhongtong agesi Co., Ltd
TE Ukuxhumana Ltd. ungumholi ngezigidigidi zamaRandi dollar ubuchwepheshe global. Kwenethiwekhi bese inzwa izixazululo yenkampani kubalulekile ezweni lanamuhla ngokuya axhunyiwe. TE uyasebenzisana onjiniyela okuguqula imiqondo ku okudaliwe - ngobutjha ukuthi yini okungenzeka usebenzisa ezihlakaniphile, esebenza kahle futhi ephezulu enza imikhiqizo TE nezisombululo kungase kutholakale ezindaweni nokhahlo. TE abalingani namakhasimende emazweni angaphezu kuka-150 kuyo yonke i-anhlobonhlobo izimboni. NJALO UKUXHUMANA ibala.
Molex , ngo-1938, ungomunye abakhiqizi Kunawo Wonke Emhlabeni global kwemikhiqizo oluchazayo. Molex kudala ezintsha umkhiqizo izixazululo wire-to-wire, wire-to-ibhodi, futhi ibhodi-to-ibhodi nezixhumi, kuhlanganise unhlokweni, backplane, ukugcina, Telecom, Ethernet, futhi ikhebula, kanye nesicelo tooling. Imizamo Molex sika ukunciphisa imithelela kwezemvelo imisebenzi yebhizinisi, imikhiqizo, kanye namasevisi bukaJehova kubonakala ukuzibophezela kwabo ohlelweni imvelo ukuphathwa kwabo, ECOCARE.
JST inikeza ezihlukahlukene wiring amahanisi uxhumano izinhlelo elakhelwe yezimoto emakethe ingxenye. JST okuhlukanisa uqobo kusukela yonke insimu ngokunikeza uxhumano izinhlelo oluvame idlule umkhakha amazinga isihlobo ukuze kulingane, ifomu bese umsebenzi. Imikhiqizo JST sika ingatholakala njalo isicelo yezimoto uhlelo ngaphesheya zonke OEM imoto umugqa emhlabeni jikelele. Ngokukhetha uxhumano uhlelo JST wena eqinisekisa impumelelo kuzo zonke izinto eziklanyiwe kanye yokukhiqiza inqubo yakho
Hirose Electric Inkampani ngokukhethekile womshini nezixhumi futhi ubelokhu esivivaneni ekuthuthukiseni electronics wemboni engaphezu kwengu-70. Onesizotha futhi othobekile ibhizinisi ifilosofi yabo ngokufuna ukuhlakanipha ezivela kuyo yonke imithombo futhi zokuhlanganisa lolo lwazi ukuze silondoloze high kahle lifanelwe Hirose abaqotho amakhasimende base. Hirose futhi izinikele ezemvelo enkulu ekwakhekeni nezixhumi ezifana nezixhumi coaxial, FFC / FPC nezixhumi, futhi eyodwa futhi double irowu izixhumi.
Bosch Amadivayisi axhunyiwe futhi Solutions , inkampani ephethwe ephethwe ngokugcwele uRobert Bosch GmbH, Kutfutfukisa nezimakethe lamadivayisi axhumene ezintsha kanye nezixazululo zenzelwa-Inthanethi Sezinto (IoT). Bosch Amadivayisi axhunyiwe futhi Solutions unikeza compact imikhiqizo electronic kanye ne-software Ubuchwepheshe ezenza amadivayisi nezinto ezihlakaniphile web-inikwe amandla.
Delphi Connection Systems kuyinto umholi wezwe usinika zemoto kagesi nokusatshalaliswa izinhlaba, nge idumela okungenakuqhathaniswa ekuklanyweni, ukuthuthukiswa, kanye umkhiqizo kagesi nawe-elekthronikhi izinhlelo uxhumano kanye namadivayisi. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-100, eDelphi wagxila ukuhlinzeka umkhiqizo ukusebenza enkulu nokushayela ubuchwepheshe yakusasa. Packard Electric itholwe yi Delphi Connection Systems ngo-1995.
Yazaki Corporation kuyinto ezimele ingxenye yezimoto umenzi eyasungulwa ngo-1941 Kanye yezimoto wire amahhanisi, umkhiqizo wethu core okuyiwona Siyalilaya isabelo phezulu ezimakethe zomhlaba, sihlakulele futhi enza amamitha, zikagesi futhi nezinye imikhiqizo for yezimoto ukuyisebenzisa.
Sumitomo Wiring Systems kunengxenye ekwakheni umphakathi echumayo ubuchwepheshe esiphakeme futhi izinga umkhiqizo.
Kusukela yezimoto wiring amahhanisi, ibhizinisi lethu core, ukuze imoto kagesi futhi hybrid izingxenye imoto, zikagesi nokuningi, sinikela ngemikhiqizo ukuthi ukuhlangabezana nezidingo yobudala.